တောင်ရိုးလူငယ်များ နှင့် လူမှုကိစ္စများ (ပွေးလှမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများ) Taung-Yo Younger People and Social Relations, Around the Pwe Hla Township ﻿
Tin Ye (University of Yangon, 1972)
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြရာ၊ သူ့ဒေသသူ့ဓလေ့ထုံးစံနှင့်သူ ရှိကြသော်လည်း၊ လူမျိုးတမျိုး၏ဓလေ့ထုံးစံ အယူအဆ စိတ်နေသဘောထားသည် ကျန်အခြားလူမျိုးများ၏ ဓလေ့ထုံးစံ အယူအဆ စိတ်နေသဘောထားများနှင့် ...
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ဆည်ပေါက်ရွာနေသူတို့၏လူမှုရေးအခြေအနေများကိုစီးပွါးရေးနှင့်ယှဉ်တွဲလျက် ကွင်းဆင်းလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁၉၅၃ မှ ၁၉၇၃ ခုနှစ်အထိ) ﻿
Kyaw Han (University of Yangon, 1974)
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မအူပင်မြို့နယ်၊ တနီးကျေးရွာနေသူတို့၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ ﻿
Mya Mya Khin (University of Yangon, 1974)
ပဲခူးမြို့၊ ဟင်္သာကုန်း၊ မွန်စံပြရွာနေမွန်တိုင်းရင်းသားများ၏ လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံကို ကွင်းဆင်းလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း ﻿
Ni Lar Tin (University of Yangon, 1974)
မြစ်ကြီးနားမြို့၊ တပ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်ဂျန်ဒုံကျေးရွာနေ ဂျိန်ဖော့တိုင်းရင်းသားတို့၏ လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံ ﻿
Khin Htay Htay (University of Yangon, 1995)
စစ်ကိုင်းတိုင်း-ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ် မံစီလေး ၁၆ အုပ်စု မြောက်မော်ကျေးရွာနေ ကတူး တိုင်းရင်းသားတို့၏ လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံကို ကွင်းဆင်းလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း ﻿
Thuzar Aung (University of Yangon, 1995)
မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ် (ဘီလူးကျွန်း) နှီးမှုတ်ကျေးရွာရှိမွန်လူမျိုးတို့၏လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံ ﻿
Lei Kay Thi (University of Yangon, 1995)
ရန်ကုန်တိုင်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ဇီးအိုကုန်းနေ၊ စကောကရင်တိုင်းရင်းသားတို့၏လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံ ﻿
Lwin Lwin Mon (University of Yangon, 1995)
ပဲခူးတိုင်း၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများရှိ အရှို (မြေပြန့်) ချင်းတိုင်းရင်း သားတို့၏ လူမှုရေး ဖွဲ့စည်းပုံ ﻿
Nyunt Nyunt Win (University of Yangon, 1996)
National solidarity is necessary for the construction of the modern developed country. For this purpose, we need to understand and recognize the each ethnic group's tradition, custom and culture which are maintained and ...
ဝါးခယ်မမြို့နယ်၊ မိုးမခ (သက္ကယ်) ကျေးရွာနေ အနောက်ပိုးကရင်တို့၏လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံ Social organization of Anauk Poe Kayin living in Moemakha (Thekke) village, Warkhema Township ﻿
Khin Moe Moe Kyu (University of Yangon, 1996)
ဤကျမ်းသည် ဝါးခယ်မမြို့နယ်၊ မိုးမခ (သက္ကယ်) ကျေးရွာနေ အနောက်ပိုးကရင်တို့၏ လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံကို လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။ ကျမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မနုဿဗေဒရှုထောင့်မှ တိုင်းရင်းသားများ၏ ယဉ်ကေျးမှုဓလေ့ထုံးစံများကို လေ့လာဖေါ်ထုန်ရန်၊ ...
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ စန်းကားကျေးရွာရှိ လော်ဝေါ်တိုင်းရင်းသားတို့၏ လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံ ﻿
Thidar Htwe Win (University of Yangon, 1997)
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကျောက်မဲမြို့နယ် စခန်းသာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏လူမှု ရေးဖွဲ့စည်းပုံ ﻿
Mya Thidar Aung (University of Yangon, 1998)
ကျောက်မဲမြို့နယ် ဟူးကွက်ကျေးရွာနေ ရူခိုင်းတအာင်း (ပလောင်) တိုင်းရင်းသားတို့၏လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပ ﻿
Myint Myint Aye (University of Yangon, 1998)
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်ကျောက်တလုံးဒေသရှိ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံ ﻿
Aye Aye Aung (University of Yangon, 1998)
ကရင်ဖြူတို့၏ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများပေါ်တွင် အခြေခံသောလူနေမှုဘဝ (ပျဉ်းမနားမြို့ပတ်ဝန်း ကျင်ကျေးရွာများ ﻿
Naw Tin Thet Samm (University of Yangon, 1998)
ဤကျမ်းသည် ပျဉ်းမနားမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများတွင် နေထိုင်သော ကရင်ဖြူတို့၏ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများပေါ်တွင် အခြေခံသော လူနေမှုဘဝကို လေ့လာထားပါသည်။ ကရင်ဖြူတို့သည် ကရင်မျိုးနွယ်အုပ်စု (၁၁) စုအနက်မှ (၁) စုဖြစ်ပါသည်။ ...
The Social Organization of the Kayan (Padaung) National Panpet Village Group, Deemawso Township Kayah State ﻿
Moe Thida Htwe (University of Yangon, 1999)
The Social Organization of the "Yin Kya" Nationals of Nam-Lit Village Tract, Nam-San Township, in the Southern Shan State Union of Myanmar ﻿
Htin Aung Aung Oo (University of Yangon, 1999)
The Social Organization of the Lachid (Lacid) Nationals of Madeing Village, Waing-Maw Township, Kachin State ﻿
Hla Hla Kyi (University of Yangon, 1999)
The Social Organization of the Dawei National Dawei Township, Taninthayi Division, Union of Myanmar ﻿
Aye Sandi (University of Yangon, 1999)
In human society, human beings live in separate communities and they undertake and conduct social, economical administration and religious affairs for their society's solidarity. When one wants to study any of the society ...
The Social Organization of the Kayaw Nationals of Hoya Village Tract, Phruso Township, in the Kayah State Union of Myanmar ﻿